Global Voices teny Malagasy » Maldiva: Fanakatonan’ny Blaogin’ireo Mpanohitra Sy Mpanenjika Silamo · Global Voices teny Malagasy » Print
Maldiva: Fanakatonan'ny Blaogin'ireo Mpanohitra Sy Mpanenjika Silamo
Voadika ny 15 Oktobra 2018 1:48 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Sylvia Aimée
Sokajy: Maldiva, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, GV Mpisolovava
Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2009)
Vohikala marobe nampangaina ho mpanohitra sy mpanenjika silamo no tsy azo idirana intsony ao Maldiva. Nanome baiko ny Tomponandraikitry ny Serasera [Telecommunication Authority of Maldives (TAM)] ny Minisitry ny Raharaha Silamo mba hanakatona ny fidirana amin'ireo vohikala ireo.
Milaza  ny blaogy Maldives Dissent fa [amin'ny teny anglisy, toy ireo blaogy voatanisa rehetra] :
Herinandro taorian'ireo fanambaràna nataon'ny filoham-pirenena Anni, izay mikasa ny hanao an'i Maldiva ho fasan'ireo mpanoratra voan'ny tsindry hazo lena, nosakanan'ny governemantany ny vohikalan'ny mpanohitra. Nosakanan'ny Tomponandraikitry ny Serasera ny vohikala raajjeislam.com noho ny baikon'ny Ministeran'ny Raharaha Silamo. […] Nosakanana ny vohikala ny marainan'ny namoahana ny rakipeo  nataon'i Imam de Foakaidhoo, M. Mohamed Shakeeb, izay niampangany fa nandrahoana azy ny Minisitry ny Raharaha Silamo.
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, mitatitra  ny Maldives Dissent fa:
Mitombo ny lisitr'ireo vohikala voararan'ny governemanta an'ny Filoham-pirenena Anni, eo ambany fibaikoan'ny Ministeran'ny Raharaha Silamo. Araka ny voalazan'ny Haveeru , valo ankehitriny ireo vohikala nakatona noho ny fiampangana fa namoaka an'ireo vontoatin'ny fanoherana silamo sy mpiaro ny kristianina amin'ny teny dhivehi, fiteny ao Maldiva.
Iray tamin'ireo vohikala nakatona, ny randomreflexions.com, blaogy iray amin'ny teny anglisy, no mety ho nokendrena noho ny famohazana an'ireo adihevitra sy ireo fifanakalozan-kevitra mikasika ny Silamo. Ary fara fahakeliiny, iray tamin'ireo vohikala nosakanana, ny raajjeislam.com, no mety ho hita nokendrena noho ireo hevitra ara-politika satria nanao tatibolana mikasika ny jadona ataon'ny Minisiteran'ny Raharaha Silamo.
Volana maromaro lasa izay, navoaka ireo tatitra  izay nilaza hoe ny Ministeran'ny Raharaha Silamo no nikarakara ny fanakanana an'ireo vohikala rehetra manindrahindra ny kristianisma ao Maldiva.
Mamoaka ny lisitr'ireo vohikala nakatona  ny Jawish Hameedpublie ary manome an'ireo antony mety nahatoga an'io fandraràna io:
Ny Seedhaahithun.com, sidahitun.com sy ny gospelgo.com no hita fa nosakanana noho ny “fanindrahindrana ny finoana kristianina”, […]. Nakatona noho ny fangatahan'ny “tomponandraikitra ambony” iray ao amin'ny Feydhoo School, ny feydhooschool.info. Manana ahiahy tena matotra aho mikasika ny fahefana ara-dalàna ananan'i MoIA (Minisiteran'ny Raharaha Silamo, fnm) hanakatona ny vohikala rehetra amina antony tsy misy dikany toa io.
Voalazan'ny blaogera fa fanakatonana faobe an'ireo vohikala no nisy satria voasakana avokoa ireo anaran-tsehatra rehetra mifandraika amin'ireo vohikala nokendrena :
Midika izany fa vohikala mitontaly 909 no niharan'ny tsy fidiny tamin'io fepetra tsy misy dikany io mba hisakanana fotsiny an'ireo sasantsasany. Voamarin'ireo mpamatsy fidirana amin'ny aterineto roa, Dhiraagu sy ROL, io vaovao io.
Blaogera maldiviana marobe toa an'i Al Mode  no niharan'io fanakatonana io. Namoaka fijery iray an'ireo fidiran'ny mpampiasa Tweeter ao Maldiva ny blaogy Breaking Tweets , tamin'ny fanamarihana ny fanoheran'ireo vahoaka ao Maldiva:
@sofwath  (Malé, Maldives) : tsy nanova olona ianao satrianoterenao hangina izy.
Mihevitra  i Ali Naafix fa misy antony ara-politika ao ambadik'io fanakatonana io:
Manao izay danin'ny kibony ny Minisiteran'ny Raharaha Silamo, ambany fifehezan'ny antoko mpanohitra  Adhaalath  (Ny Antokon'ny Rariny) :
Tao anatin'ny fandaharanasany tamin'ny fifidianana, nanazava tsara ny MDP fa hanofana tarika iray tsy miankina ahitàna an'ireo sionita silamo mpikaroka izy. Na izany aza, mbola noketriketrehan'i Adhaalath ihany ny hamolosana an'io tarika tsy miankina io. Tsy nanofana tarika mpikaroka iray tsy miankina izy, fa ny famoronana sy ny fitokanana ny Académie Figh, notarihin'i Dr. Abdul Majeed Abdul Baaree ary nahitana indrindra indrindra an'ireo mpikambana na ireo mpanohana ny Adhaalath no natrehantsika.
Melohiko ny zavatra ataon'ny Minisiteran'ny Raharaha Silamo sy ny Filoham-pirenena Anni noho ny nanakimpian'izy ireo ny masony tsy hijery an'io. Manantena aho fa ho afaka hanohy blaogy.
Manana ity hafatra ity ho an'ny governemanta ny Maldives Dissent :
Alohan'ny hahatonga an'i Maldiva ho toerana iray azo antoka ho an'ireo mpanohitra erantany, tokony ahitana tontolo iainana iray sahaza izy mba hisokafan'ny fahalalahana maneho hevitra ho an'ireo mpanoratra ao aminy manokana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/15/127332/
 lisitr'ireo vohikala nakatona: http://www.jawish.org/blog/archives/345-Mass-internet-censorship-in-effect-in-the-Maldives!.html
 Al Mode: http://almode.blogspot.com/2009/03/i-condemn-internet-censorship-by.html
 Breaking Tweets: http://www.breakingtweets.com/2009/03/maldives-blocks-anti-islamic-web-sites.html